हामीले न्याय पाएनौं « Loktantrapost
हामीले न्याय पाएनौं
२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:२१
इलाम / सूर्योदय नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित तारागाउँका चार जना विद्यार्थीहरु यहि जेठ १० गते विहान ७ ः३० वजे सूर्योदय–७, कन्यामस्थित श्रीकृष्ण आश्रममा पढ्न गएका थिए ।
(समाचारमा प्रयोग गरिएको ढलेको रुखको तस्वीर घटनास्थलको होइन, सांकेतिक रुपमा अन्यत्रबाट लिइएको हो ।)
पढ्न गएका चार जना विद्यार्थीहरुमा कक्षा–९ का भेषराज गजमेर, कृतिका रसाइली र मेघा रसाइली तथा कक्षा–७ का योगेश रसाइली थिए । घरदेखि पाँच सय मिटर पर सूर्योदय–६ को कञ्चनजङ्घा टोलमा निरौला वस्ती छ । घरदेखि स्कुल पुग्न ढेड घण्टा लाग्छ ।
बाक्लो वस्ती भएको गाउँमा हर्कटे–तारागाउँ जाने कच्ची सडक मर्मत कार्य भइरहेको थियो । उक्त दिन निरौला वस्तीमा टिकाराम निरौलाको शुभ विवाह भइरहेको थियो ।
सूर्योदय–६ का वडा अध्यक्ष शिवकुमार वस्नेतको निर्देशनमा स्काभेटरले सडक मर्मत गरिरहेको थियो । स्काभेटरले सडक मर्मतको क्रममा कटुसको करिव सय फिट लामो रुख सडकमा ढाल्यो । रुख ढल्ने क्रममा स्कुल गइरहेका चार जना विद्यार्थीहरुलाई किच्यो । करिव ८ वजे ती विद्यार्थीहरुलाई रुखले किच्यो ।
स्थानीय राधाकृष्ण पौडेलको जग्गामा रहेको उक्त रुख सडक मर्मत गरेको नजिकै थियो । उक्त रुख हटाउन स्काभेटर प्रयोग गरिएको थियो । रुखले लागेर भेषराज, कृतिका, मेघा र योगेश घाइते भए ।
भेषराजको खुट्टा भाँचियो, कृतिकाको टाउकोमा चोट लाग्यो, मेघा र योगेश सामान्य घाइते भएका थिए । ढलेको रुख र हाँगा पन्छाएर उनीहरुलाई स्थानीय केशव निरौलाको घरको आँगनमा करिव १० मिनेट राखियो ।
एकछिनमा एम्बुलेन्स बोलाएर उपचार गर्न लाने, घाइतेका अभिभावक बोलाएर कागज गरुला भनेर वडा अध्यक्ष वस्नेतले सडक मर्मतको काम सुचारु गर्न स्काइभेटर निर्देशन गरे । सोही अनुरुप स्काभेटरले सडक मर्मत कार्य फे िसुरु गर्यो ।
करिव ९ वजेको समयमा ११ किलोमिटरको दुरीमा रहेको फिक्कलबाट एम्बुलेन्स बोलाइयो । फिक्कलको स्वास्थ्य चौकीमा घाइतेलाई लगियो । एम्बुलेन्समा कृतिकाकी आमा कला रसाइली, भेषराजकी आमा तेजमाया गजमेर, स्थानीय बुद्वबहादुर कार्की र भेषराजको मामा म फिक्कलको स्वास्थ्य चौकीमा लाग्यौं ।
स्वास्थ्य चौकी नपुग्दै भेषराजले आया… आया…. मरे भन्दा भन्दै उनको प्राण गयो । स्वास्थ्य चौकीमा पुगेपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गर्यो ।
कृतिकालाई झापाको विर्तासिटी अस्पताल ल्याइयो । विर्तासिटिमा सिटीस्क्यान नभएकोले वीएन्डसी अस्पताल रेफर गरियो । वीएन्डसी अस्पतालमा उपचारपछि अहिले घर लगिएको छ ।
यता सामान्य घाइते भएका योगेश घर पुगेको केहि घण्टा अर्थात दिउँसो १ वजे एक्कासी लाटिन थाले । उनलाई पनि वीएन्डसी अस्पताल पुर्याइयो । योगेशको कानको जाली फुटेको रहेछ । उनलाई पनि उपचारपछि राम्रो भएर घर लगिएको छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा मृत घोषणा गरिएका भेषराजलाई पोस्टमार्टम गर्ने कि नगर्ने विषयमा त्यो दिन राति करिव १२ वजेसम्म छलफल भएको थियो । ईलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक होमराज ओली, सूर्योदय नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष होम कार्की, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख चित्रकला बराइली, सूर्योदय–६ का वडा अध्यक्ष शिवकुमार वस्नेत, प्रदेश सांसद् काजीमान कागते, नगरपालिकाकी उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराई, कञ्चनजङ्गा टोल विकास समितिका अध्यक्ष नरनाथ पौडेल, लगायतले घटना घटिसक्यो अब क्षतिपूर्तिसहितको मिलापत्र गरी पोस्टमार्टम गर्नु पर्छ भन्ने दवाव दिइएको थियो ।
हामीले छलफलमा समयमा उपचार नभएका कारण दलित गरिवका छोराछोरीको मृत्यु भएकोले लापरबाही गर्ने दोषीलाई कारवाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका थियौं । उक्त माग सम्बोधन नभए किटानी जाहेरी दिने कुरा राख्दा हामीलाई विभिन्न खालका दवाव सिर्जना गरिएको थियो ।
अन्तिममा छलफलले क्षतिपूर्र्ति स्वरुप ५ लाख उपलब्ध गराउने र छानविन समिति गठन गरेर १५ दिन भित्र प्रतिवेदन तयार गरेर दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तत्काल किरियाखर्चका लागि पीडित परिवारलाई २५ हजार नगद दिइएका थियो भने छानविन समितिको निर्णय आएपछि थप रकम उपलब्ध गराउने हामीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
छानविन समितिमा मानव अधिकार मञ्च इलामका देवेन्द्र विश्वकर्मा, सूर्योदय नगरपालिकाका सहायक प्रशासकीय अधिकृत सविना चौलागाई, शिक्षा शाखा प्रमुख रुद्रमणि सापकोटा, इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक होमराज ओली लगायत छन् । हामीलाई प्रहरी निरीक्षक ओलीले स्काभेटरका चालक राजेन्द्र तामाङलाई पक्राउ गरी मुद्धा चलाइएको बताएका छन् ।
छानविन समितिले हामी पीडित परिवारलाई उचित न्याय नदिए किटानी जाहेरीसहित मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।
(मृतक भेषराजका मामा अमृत रसाइलीसँग कुराकानीमा आधारित)